How to Improve your English speaking skill (part-2) အင်္ဂလိပ်စကားပြောတိုးတတ်အောင် ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ (အပိုင်း-၂) - Myanmar Network
How to Improve your English speaking skill (part-2) အင်္ဂလိပ်စကားပြောတိုးတတ်အောင် ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ (အပိုင်း-၂)
Posted by Mr. Kyaw Min Thu on August 1, 2013 at 15:05 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စကားကို အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ သွက်သွက်လက်လက်ပြောတတ်အောင် ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့လေ့လာကြမလဲ ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားကြရအောင်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ စကားပြောကို အဓိကထားပြီး လေ့လာတဲ့အခါ စကားပြော သွက်လက်စေဖို့အတွက် အဓိကအတားအဆီးတခုက Grammar rule တွေကို စဉ်းစား နေခြင်းဘဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်အရင် post မှာ ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဆို Grammar ကိုအာရုံမစိုက်ပဲ English ကိုဘယ်လိုပုံစံ လေ့လာကြမလဲ ဆိုတာကို ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာရပ် တခုကို စတင်ပြီးလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာ စကားပြောနဲ့ စာရေးတဲ့ အလုပ်မှာ ဘယ်ဟာကိုစပြီး သင်ယူကြရသလဲ။ စကားကစပြီး သင်တာလား စာပေကစပြီး သင်တာလား။ ဘယ်ဟာကပိုပြီး အခြေခံကျမလဲ၊ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး တတ်လွယ်မလဲ။ ဒီအဖြေကိုသိအောင် ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ဘ၀ကိုပြန်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ငယ်ဘ၀မှာ ‘မေမေ’ ‘ဖေဖေ’ ‘မန်းစားမယ်’ ဆိုပြီး မပီကလာ ပီကလာ နဲ့စကားကို စပြောတာလား၊ ဒါမ မဟုတ် ‘၀’ လုံး ရေ ‘၀’ ၊ ‘က’ ကြီး ရေ ‘က’ ဆိုပြီးတော့ စသင်တာလား။ ဘယ်သူဘဲဖြစ် ဖြစ် ‘မေမေ’ ‘ဖေဖေ’ ‘မန်းစားမယ်’ ကစတာဘဲနော်။ ဒါဆိုရင် စကားပြောတာက စာရေးတာထက်ပိုပြီး တတ်လွယ်တာပေါ့။ ဟုတ်ပြီ ဘယ်လိုကစပြီးလေ့လာမလဲ။
အင်္ဂလိပ်စကားပြော တိုးတတ်ဖို့ကိုလေ့လာသူအများစုက ဘယ်စာအုပ်ကကောင်းသလဲဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြော စာအုပ်တွေကိုဘဲရှာဖတ်နေကြတယ်။ ကျက်မှက်နေကြတယ်။ လက်တွေ့ပြောကြမယ်ဆိုရော ဘယ်ကစပြောရမယ် မသိတော့ဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ်ကပြောချင်ရင် သူများပြောတာကို နားထောင်ရတယ်။ များများနားထောင်ပေးမှ များများနားရည်ဝလာမှာ၊ နားရည်ဝလာတာနဲ့အမျှ နားလည်လာမယ်။ သူများပြောတာကို ကိုယ်ကနားလည်မှ ကိုယ်ကပြောတတ်မှာပေါ့။ If you don’t understand, you learn nothing. သူများပြောတာတွေကို နားလည်မှ ကျွန်တော်တို့လေ့လာတာအကျိုးရှိမှာပေါ့။ ကိုယ်ကသူများပြောတာကို နားမလည်လျှင်၊ နားလည်အောင်မကျိုးစားလျှင်၊ ကိုယ်လေ့လာသမျှ အလကားဘဲ။ ဒါကြောင့် စကားပြော တိုးတတ်ချင်ရင် မိမိ၏နားကိုအသုံးပြုပြီး လေ့လာသင်ယူပါ၊ speaking စွမ်းရည် တိုးတတ်ဖို့ အတွက် Input က listening ဘဲ။ ဒါကြောင့် များများနားထောင်ပေးပါ။ ကဲအခု အခြေခံအချက် တွေကိုတော့ဆွေနွေးပြီးသွားပြီ၊ တကယ်အသုံးချရမယ့် နည်းဥပဒေတွေကို ဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။
အောက်တွင်ဆက်လက်ဖော်ပြသော နည်းဥပဒေများ(RULES#)သည် အမှန်တကယ် အသုံးကျသော နည်းလမ်းများဖြစ်ပြီး၊ ယ္ခင် သင်လေ့လာနေသော နည်းစနစ်ဟောင်းများဖြင့် ဆန်ကျင်ဘက်ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားလျက်
ရှိနေသော်လည်း သင်ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့် လိုက်နာ လေ့ကျင့်သွားပါက အချိန်တိုအတွင်း သင်၏ စကားပြော
စွမ်းရည်မှာ သိသိသာသာ တိုးတတ်လာကြောင်းကိုသင်တွေ့ရှိရပေလိမ့်မည်။
၁။ နည်းဥပဒေ (၁) ၊ စကားစု phrases များကိုလေ့လာပါ
သင်၏အဓိကမျှော်လင့် ရည်မှန်းချက်သည် အင်္ဂလိပ်စကားကို ကျွှမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဖြင့် သွက်သွက်လက်လက်
ပြောနိုင်ဖို့ပင်မဟုတ်ပါလား။ ကဲ ဒါဆိုရင် သင်၏အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပုံ နည်းလမ်းအား ပြောင်းလဲရပါမည်။
ပထမဆုံး အချက်အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားလုံး တစ်လုံးခြင်းစီ လေ့လာကျက်မှတ်မှုကို ရပ်တန့် ရပါမည်။ Stop studyasingle, individual word. စကားလုံး တစ်လုံးစီအား ကျက်မှတ်လေ့လာ မှုမလုပ်ပါနှင့်၊ စကားလုံးတစ်လုံးဆီ (single words) အစား (phrases) စကားစု များအားလေ့လာမှု ပြုလုပ်ပါ။ Phrases are GROUPS of words that naturally go together. စကားစု ဆိုတာ စကားလုံးများ၏အစုအဝေးဖြစ်တဲ့အတွက် စကားစုလိုက်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် စကားလုံး တစ်လုံးစီ နဲ့ စကားလုံးတို့ရဲ့အသုံးပြုပုံများကိုပါ လေ့လာပြီးသား ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။သင်၏မှက်စုစာအုပ် အတွင်းတွင် စကားလုံး တစ်လုံးစီ(single word) များအစား စကားစုများ (phrases) များကိုသာရေးမှတ်လေ့လာပါ။ Native speaker များသည် ဘယ်သောအခါမှ single words များကိုမလေ့လာကြပေ၊ phrases များကိုသာလေ့လာကြသည်။
၂။ နည်းဥပဒေ (၂) ၊ သဒ္ဒါကို မလေ့လာပါနဲ့
သင်၏စကားပြောစွမ်းရည်အား လျှင်မြန်စွာ တိုးတတ်လိုပါလျင်… ယ္ခုအချိန်ကစ၍ သင်၏ grammar လေ့လာမှုကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ၊ grammar rules များကို လုံးဝ ဆက်လက် မလေ့လာပါနှင့်။ Grammar rules များက သင့်ကိုအင်္ဂလိပ်စာ စာကြောင်းများ အကြောင်း စဉ်းစားပုံကို သင်ပေးလ်ိမ့်မည်၊ သင်စကားတခါပြောခါနီးအချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့စဉ်းစားနေပါက ချက်ချင်းစကားကိုဘယ်လို ပြောထွက်နိုင်ပါ တော့မည်နည်း။ ကဲ grammar rules များကိုလုံးဝ မလေ့လာရန် ပြောပြီး သွားပြီ၊ ဒီတော့ စကားပြောတဲ့အခါ Grammar အမှားကြီးနဲ့ပြောနေရင် လူရယ်စရာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဒါကိုဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ။ နည်းဥပဒေ(၅)- မှာ Grammar rules တွေကိုမလေ့လာဘဲ Grammar မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ စကားပြောနိုင်အောင် ဘယ်လို လေ့လာမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါမည်။
RULE 3: The Most Important Rule - - - Listen First
၃။ နည်းဥပဒေ (၃) ၊ များများနားထောင်ပေးပါ
သင်၏အပြောစွမ်းရည်အား သိသာစွာတိုးတတ်လိုလျင် သင်၏ နားထောင်မှုစွမ်းရည်အားမြှင့်တင်ပါ။
အလွန်ရိုးရှင်းပြီး အစွမ်းထက်သောနည်းဖြစ်သည်။ သင်၏ အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်မှု အောင်မြင်ရန်အတွက် အဓိက သော့ချက် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာ စာအုပ်များကျက်မှတ်လေ့လာချင်းများသာ စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေပါက သင်၏စကားပြောစွမ်းရည် တိုးတတ်မှုမှာနှေးကွေးနေလိမ့် အုံးမည်ဖြစ်သည်။ စကားပြောတိုးတတ်ရန်မှာ သင်၏မျက်စိကို အသုံးပြု၍လေ့လာခြင်းထက် သင်၏နားများကို များများ အသုံးပြု၍လေ့လာမှုပြုလုပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ native speaker တို့၏ စကားပြော အသံဖိုင်များကို နားထောင်ခြင်း များပြုလုပ်ပေးပါ။ သူတို့၏စကားပြောဟန် လေယူလေသိမ်းတို့ကို လေ့လာမှတ်သားပါ။ တကယ့်လက်တွေ့စကားပြော ပုံစံများကိုသာ လေ့လာပါ။ Real English conversation audio files များကို နားထောင်ပါ။ များစွာသော audio files, Mp3 files များကို Internet website , သင်ကြားရေး website များထဲမှ Download ရယူပြီး နားထောင်နိုင်ပေသည်။ (နောက် လက်တွေ့သင်ခန်းစာများ စတင်ပါက Mp3 files များကို tag ချိတ်၍ပေးသွားပါမည်။) English conversation audio files များကို မိမိတို့၏ Audio device များဖြစ်သည့် Mp3 player, Mp4 player, mobile phone, tablet စသည်တို့မှာ ထည့်သွင်း ထားပြီး အမြဲတမ်းနားထောင်
နေခြင်း အားဖြင့် သင်၏နားထောင်မှုစွမ်းရည်အား မြှင့်တင်နိုင်ပေမည်။ လူတစ်ယောက်၏ နားလည်နိုင်မှုသည် အကြောင်းအရာ တစ်ခုအား အခေါက် ၃၀ မှ ၅၀ ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်ပါက အလိုအလျောက်နားလည်နိုင်ပေရာ ၊ သင်ဘယ်သွားသွား သင်၏ audio device လေးအားယူဆောင်သွားပြီး နားထောင်ပေးပါက သင်အင်အားစိုက်ထုတ်ကြိုးစားစရာ မလိုဘဲ သင်၏စကားပြောစွမ်းရည်မှာ အလိုအလျောက် တိုးတတ်လာကြောင်းကို သင်တွေ့ရပေလိမ့်မည်။
# ကျန်ရှိနေသော နည်းဥပဒေ များအား နောက် post များတွင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားပါမည်။
Permalink Reply by minhantun on January 25, 2014 at 10:19
ွှThank you Sir.very thank you
Permalink Reply by wai soe on August 20, 2015 at 12:11
Permalink Reply by ko myo lwin on August 20, 2015 at 16:56
Permalink Reply by Yin Min Phyu on January 27, 2016 at 11:38
Permalink Reply by Aung Myint Thu on January 28, 2016 at 14:03
Permalink Reply by Nant Yin Yin Aung on January 28, 2016 at 14:15
Permalink Reply by Wai Wai Htun on January 29, 2016 at 17:14
ကျေး ဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် လိုက်နာပြီးကြိုးစားကြည့်ပါမယ်